यी खानेकुरा पकाएर खादा स्वाथ्यलाई पुग्छ हानि, जानी राखौ - ज्ञानविज्ञान
खानेकुरा हामी किन खान्छौ ? सामान्यत यसको जबाफ हो, भोक मेट्न । खानाको सम्बन्ध भोकसँग मात्र छैन । खाना त्यस्तो स्रोत हो, जसबाट शरीरलाई आवश्यक पौष्टिक तत्व प्राप्त हुन्छ । हाम्रो शरीरलाई प्रोटिन, क्याल्सियम, कार्बोहाइडेट, फाइबर आदि आवश्यक हुन्छ । यी सबैको स्रोत खाना नै हो ।
त्यसैले खाना खानु भनेको पेट भर्नु मात्र होइन, शरीरका लागि आवश्यक पौष्टिक तत्व परिपूर्ति गर्नु पनि हो ।
भन्ने गरिन्छ, जति मान्छे खान नपाएर मर्छन्, त्यो भन्दा बढी खान नजानेर । अर्थात खानेकुरा पौष्टिक तत्वको स्रोत त हो, तर त्यसलाई सन्तुलित ढंगले सेवन गर्नुपर्छ । स्वस्थ्य ढंगले सेवन गर्नुपर्छ । खानेकुरा कसरी, कहिले, कति खाने भन्ने कुराको ज्ञान हुनुपर्छ ।
स्याउ सदाबहार फल हो । सर्बगुणी पनि । यो जुनसुकै अवस्थामा खान मिल्छ । यसमा न्यूटि्रएन्ट्स र मिनरल्स हुन्छ । तर जब स्याउलाई सुखाएर खाइन्छ, त्यो सबै नष्ट हुन्छ । कतिले बच्चा वा बिरामीलाई स्याउ उसिनेर खान दिन्छन्, यसो गर्दा स्याउको क्यालोरी र कार्बोहाइड्रेट बढ्छ । यसले सुगर लेभल बढाउने काम गर्छ ।
अंकुरित गेडागुडी स्वास्थ्यका लागि एकदमै लाभदायक मानिन्छ । यसमा भिटामिन सि, फाइबर, कपर, म्याग्निशियम पाइन्छ । तर, जब अंकुरित गेडागुडी उसिनेर वा पकाएर खाइन्छ यसको पौष्टिक तत्व नष्ट हुन्छ, खासगरी भिटामिन सि ।
कतिले स्वादका लागि ड्राई फ्रुट्सलाई भुटेर वा तारेर खाने गर्छन् । यसले गर्दा त्यहाँ रहेको आइरन, म्याग्नेसियम, फस्फोरस नष्ट हुन्छ ।
Topics #काँचो #खानेकुरा #भेंडे खुर्सानी #सन्तुलित र सुपाच्य
Don't Miss it के तपाइको बच्चालाई पनि अनिन्द्राको समस्या छ ? यसो गर्नुस
Up Next पाचन क्षमता बलियो बनाउँन याद राख्नुस यी कुराहरु
गर्मी मौसममा कोल्ड ड्रिक्स भन्दा फाइदाजनक हुन्छ मही, जान्नुहोस
-पेट पोल्ने तथा ग्याष्ट्रिकले अति नै सताएको छ भने घुट-घुट गर्दैै मही पिउनुस् । एकैछिनमा ठिक हुन्छ । साथै महीमा…
आलुलाइ तरकारीको राजा पनि भन्ने गरिन्छ जो तपाई/हाम्रो भान्सामा हरेक छाक पाक्छ । यस्तो लाग्छ कि तरकारी भनेकै आलु हो…